वर्माको रहस्यमय मृत्यु
नारायण खड्का दाङ, साउन २४
दाङ घोराही निवासी प्रमोद वर्माको शव राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. २ अगैया जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ । उनको हत्या भएको आशंका गरिएको छ । जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेपछि त्यसलाई प्रहरीले पनि रहस्यमय भनेको छ । दाङ घोराहीमा कार्यरत पत्रकार पार्वती बस्नेतका श्रीमान् अन्दाजी ३५ वर्षीय वर्मा नेपाल बैंक लिमिटेड गुलरिया बर्दियाका म्यानेजर हुन् । तर उनको शव राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. २ अगैया जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख एवं डिएसपी सुरेश काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनले प्रयोग गर्दै आएको रा २ प १६६८ नम्बरको निजी मोटरसाइकल भने अगैया नजिकै ह्यान्डल लक गरेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले बताएको छ । ‘वर्माको दाङतिरै सरुवा भएको रहेछ, तर उनले अफियसल लेटर भने आइतवार मात्रै बुझ्ने भन्ने सहमति रहेछ ।’ इप्रका कोहलपुरका प्रमुख काफ्लले सेतोपाटीलाई भने ‘वर्मा शनिबार राति नै बर्दियाबाट हिडेको भन्ने खुल्न आएको छ ।’ डिएसपी काफ्लले बाहिरबाट हेर्दा वर्माको अण्डकोषमा घाउ देखिएको जानकारी दिए । ‘घटनाको प्रकृतिहेर्दा रहस्यमय छ ।’ काफ्लेले भने ‘ तर, तथ्य पोष्टमार्टम रिपोट पछि मात्रै पत्ता लाग्ने छ ।’ वर्माको पोष्ट मार्टम बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा गरिएको उनले बताए ।
हत्या भएको परिवारको दाबी
यसैबीच पत्रकार पार्वती बस्नलेतले भने आफ्ना श्रीमानको हत्या नै भएको दाबी गरेकी छन् । झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको शवको एउटा आँखा फुटेको, एउटा हात भाँचिएको र शरिर भरी रडले हानेको जस्ता निलडाम रहेको हुँदा आफ्ना श्रीमान वर्माको हत्या नै भएको उनले सेतोपाटीलाई बताईन् । प्रहरीले पनि वर्मा डेरामा बस्दै आएको बर्दीयास्थित घरबाट किन रातको समयमा निस्किए ? भन्ने प्रश्न रहस्यमय रहेको बताए ।
यसैबीच वर्माले उक्त दिन राति एकजना साथि जंगलमा हराएको भनेर दाङ निवासी तर बर्दियामा कार्यरत एकजना प्रहरीलाई राति नै खबर गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको पनि जानकारी दिएको छ । घटनाको सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान भइरहेको हुँदा त्यस्मा को कस्को सम्लग्नता छ भन्ने अनुसन्धान शुरु भएको ईप्रका कोहलपुरका प्रमुख काफ्लेले बताए । बर्माको शव सोमबार बेलुका जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २४, २०७४, ११:११:०३